IOfisi 2019 iyeza kunyaka olandelayo ukuba ithathe indawo yeOfisi 2016 | Iindaba zeGajethi
Abasebenzisi abaqhelekileyo beofisi yeMicrosoft bahlala hayi kwiOfisi 365 kuphela. Ngaphandle kwento yokuba uninzi lweenzame zikaMicrosoft zijolise kuhlobo olukwi-Intanethi lweOfisi, abafana baseMicrosoft bayaqhubeka nokusebenza kuhlobo lobomi bonke, oko kukuthi, uguqulelo olunokuthengwa kwaye aludingi kubhaliswa.nyanga okanye ngonyaka ukuthatha Uncedo kuyo yonke imisebenzi yayo. Okwangoku ingxelo yokugqibela yeOfisi yesiqhelo ngaphandle kokuxhomekeka kwilifu ngu-2016, kodwa kunyaka olandelayo izakutshintshwa yiOfisi 2019, njengoko kwabhengezwa ngu-Microsoft kwinkomfa ye-Ignite eyayibanjelwe e-Orlando.
Le nguqulo ilandelayo iya kuthi isinike zonke iindaba ezifumanekayo kuhlobo lweOfisi 365, kuxhomekeke kwinguqulelo esiyithengayo, kungenjalo, kungakhathalekile uhlobo esilusebenzisayo, asizukuphulukana nomsebenzi nokuba sisebenzisa uhlobo olunye okanye enye, into enokubulela ngayo kwiMicrosoft. IOfisi 2019 iza kuza neLizwi, i-Excel, iPowerPoint kunye ne-Outlook ngesandla, kodwa ayizukuphela kwabo, kuba I-Skype yeShishini, uTshintshiselwano, kunye ne-SharePoint ziya kufumaneka kolu khululo.
Ukukhutshwa kwenguqulelo elandelayo yeOfisi icwangciselwe umbindi wonyaka olandelayo. Kwiinyanga ezimbalwa, uMicrosoft uza kuqala ukwazisa iinguqulelo zangaphakathi zale nguqulo intsha yeOfisi, ke ukuba uyinxalenye ye- Inkqubo yeOfisi ngaphakathi, ezahlukileyo kwiWindows, siya kwaziswa xa i-beta yokuqala ifumaneka ukuze ikhutshelwe.
Ukuba awukabi yinxalenye yale nkqubo, kufuneka uye kule khonkco ilandelayo kwaye ubhalise. Akukho mfuneko yokuba nelayisensi yeOfisi, ke nabani na one-PC ohambelana nohlobo olulandelayo lweOfisi angabhalisa, phantse wonke umntu zilawulwa ngoku Windows 10. Into esingayaziyo kukuba ngaba iOfisi yeMicrosoft izakufuna ubuncinci benguqulelo yeWindows ukuyifaka, inyathelo elingenakundothusa kodwa elinokunceda ekuphuculeni isabelo sentengiso Windows 10 nangona ingayenzakalisa xa kufikwa kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IOfisi 2019 iyeza kunyaka olandelayo ukuba ithathe indawo yeOfisi 2016
Nacho, ubhekisa kwikhonkco, ubuncinci alibonakali kum ... ungayijonga?
Ngaba ucinga ukuba ndiza kuba nakho ukuhlaziya ukusuka eofisini 2007? (Wink, wink)
ekukhawuleziseni andiyibekanga. Ngoku ndiyongeza.
Enkosi ngekhonkco !!
URaul Aviles sitsho
Phendula uRaul Avilés